मोदीको नेपाल भ्रमण अगावै किन अाए थाइल्याण्डका सेना प्रमुख नेपाल? – PathivaraOnline
Home > समाचार > मोदीको नेपाल भ्रमण अगावै किन अाए थाइल्याण्डका सेना प्रमुख नेपाल?
मोदीको नेपाल भ्रमण अगावै किन अाए थाइल्याण्डका सेना प्रमुख नेपाल?
admin May 2, 2018 समाचार	0
काठमाडौँ, १९ बैशाख । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको औपचारिक निमन्त्रणामा ४ दिने नेपाल भ्रमणमा मित्रराष्ट्र थाईल्याण्डको रोयल थाई आर्म्ड फोर्सका जेनेरल तार्नचाइयान श्रीसुवान नेपाल आएका छन् । श्रीसुवान बुधबार काठमाडौँ आई पुगेका हुन् । उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बलाधिकृत पूर्णचन्द्र थापाले स्वागत गरेका थिए । जेनेरल श्रीसुवानले बुधबार नै टुंडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा रहेको वीर स्मारकमा माल्यार्पण गरेका छन् ।
त्यस्तै, जङ्गी अड्डा परिसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले उनलाई सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । साथै प्रधानसेनापति क्षत्री र जेनेरल श्रीसुवानबीच द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका बिषयमा जंगी अड्डामा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको थियो । सोहि अवसरमा उनलाई जंगी अड्डामा आयोजित छुट्टै कार्यक्रममा नेपाली सेना सम्बन्धी विविध विषयमा प्रस्तुतिकरण गरिएको थियोे ।
भ्रमणको दौरान उनले पोखरा, लुम्बिनीलगायत अन्य केहि पर्यटकिय स्थलहरुको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै उनले पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रको निरीक्षण भ्रमण गर्ने बताइएको छ ।
सिमामा एकाएक बढ्यो हिंसा सेनाकाे फाइरिङबाट २२ जनाको मृत्यु,
मलेसियामा रहेका अबैध नेपालीहरूकाे लागि अायो यस्तो खुशीकाे खबर
बैतडी काण्डः १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको ‘भेजाइनल स्वाब’ काठमाडौंमा!
हावाहुरी बाट ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई राहत बाड्दै – हेर्नुहोस कति कति बाड्दै छन् ?
मागेर क्रिकेट रंगशाला होईन एकसय रुपैयाँमा उपचार हुने अस्पताल बनाउनुहोस् – पुरा हेर्नुहोस
म के सेक्सी देखिन्छु भन्दै कार्तिक आर्यनले आफ्नो फोटो पोष्ट गरेपछि
यी युवतीकाे पीडाः आफुलाई इच्छा हुन्थेन तर पनि…
देशभर कोरोना संक्रमित बढेसँगै बढे मृ’त्यु सँख्या पनि, कतिले जिते कोरोना?
बिहेमा मोटरसा’इकल दा’इजो न;पाएको नि’हुँमा श्रीमतिकै ह’त्या
गंगा नदीमा तैरिदै आएको काठको बाकसमा २१ दिनकी बालिका, बाकस भित्र बालिकाको जन्मकुण्डली र देवी देवताका फोटो
काठमाडौंमा अचनाक किन देखियो यस्तो सङ्केत?